EYONQULO 13 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYONQULO 13EYONQULO 13
Izigulo zolusu nenkqubo ephathelelene nazo
131Nantsi inkqubo eyanikwa uMosis *nguNdikhoyo: 2Xa kukho umntu onesilonda, nokuba lithumba, nokuba kukujaduka okungahle kube sisifo solusu esosulelayo, loo mntu kufuneka asiwe kumbingeleli womlibo ka-Aron. 3Wosixilonga eso silonda umbingeleli. Ukuba ke ubhaqe uboya sebujike bamhlophe, ukanti nesilonda eso ukubhidla kwaso kube nzulu kunolusu olungaphandle, eso silonda ke senziwa sisifo esosulelayo, iqhenqa.IsiHebhere sibiza iqhenqa nezinye iintlobo zezifo zolusu ngegama elinye. Eli gama lidla ngokutolikwa ngeqhenqa, nangona lingathethi lona kuphela. Umbingeleli ke uya kwazisa ukuba loo mntu *unomlaza. 4Ukanti ke ukuba eso sisilonda nje, saye singenzulu kunolusu, noboya bungajikanga baba mhlophe, umbingeleli womgcina bucala loo mntu iintsuku zibe sixhenxe angadibani nabanye. 5Wophinda amxilonge emva kwezo ntsuku, kuthi ke xa umbingeleli ebona ukuba eso silonda asibhidlanga, sisenjengakuqala, aphinde amgcine bucala kwaesinye isixhenxe seentsuku. 6Wobuya amxilonge umbingeleli kwakhona emva koko, kuthi ke ukuba eso silonda sirhawukile endaweni yokubhidla, azise ke ukuba loo mntu akanamlaza, uhlambulukile. Loo mntu ke kufuneka ahlambe impahla yakhe, ukuze angabi namlaza. 7Kodwa ukuba emva koko isilonda sithe sabhidla, kufuneka aye kwakumbingeleli loo mntu kwakhona. 8Wophinda amxilonge umbingeleli, kuthi ukuba eso silonda siyabhidla, umbingeleli azise ukuba loo mntu unomlaza, unesifo esosulelayo, iqhenqa.IsiHebhere sibiza iqhenqa nezinye iintlobo zezifo zolusu ngegama elinye. Eli gama lidla ngokutolikwa ngeqhenqa, nangona lingathethi lona kuphela.
9Xa kukho umntu onesifo solusu esosulelayo, kufuneka asiwe kumbingeleli 10oya kuthi amxilonge. Xa eso silonda saloo mntu sivuthiwe, sinobubovu, sijike noboya baba mhlophe, 11loo mntu unesifo esibi solusu. Uya kuthi ke umbingeleli azise ukuba lowo unomlaza. Onjalo akayi kuba saba phantsi komgqaliselo, kuba kwaziwa phandle ukuba unomlaza. 12Xa eso sifo solusu sinwenwe sada sathi gqume wonke umzimba, 13umbingeleli kufuneka amxilonge lowo. Xa ebona ukuba isifo simthe gqume wonke umzimba, uya kuvakalisa ebantwini ukuba loo mntu akasenawo umlaza ngoku. Ukuba ulusu lwakhe luthe lwajika lwamhlophe, loo mntu uhlambulukile. 14Kodwa ukuba kuthe kwavela isilonda, usuka kwangoko abe nomlaza. 15Kufuneka aphinde umbingeleli amxilonge, aze athi akufumana isilonda, azise ukuba loo mntu ubuye wanomlaza. Isilonda sixela isifo solusu esosulelayo; umntu onaso ke unomlaza. 16Xa sibuye saphola ke isilonda eso, lwaba mhlophe ulusu, loo mntu kufuneka aye kumbingeleli. 17Umbingeleli uphinda amxilonge. Ukuba ke isilonda eso sikhe samhlophe, umlaza uphelile, umbingeleli kufuneka ukuba azise ukuba loo mntu uhlambulukile.
18Xa kukho umntu obe nethumba, laza laphila, 19kuze kuthi kamva kubekho indawo emhlophe ethe fuku, okanye kuvele indawo ebubomvu-bumhlophe kulaa ndawo ibe inethumba, loo mntu kufuneka aye kumbingeleli. 20Umbingeleli womxilonga, kuthi ke ukuba loo ndawo idumbileyo inzulu kunolusu lwangaphandle, noboya bujike baba mhlophe, kufuneke ke ukuba umbingeleli azise ukuba loo mntu unomlaza. Laa nto iqale ngethumba sisifo solusu esosulelayo. 21Kodwa xa athe umbingeleli wabona ukuba kuloo ndawo idumbileyo abujikanga baba mhlophe uboya, yaye ayinzulu kugqitha ulusu lwangaphandle, yaye irhawukile, womgcina bucala loo mntu iintsuku zibe sixhenxe. 22Ukuba loo ndawo ithe yabhidla, umbingeleli wokwazisa ukuba loo mntu unomlaza, kuba unesifo esosulelayo. 23Kodwa ukuba loo ndawo ihlala injengoko ibinjalo, ingabhidli nokubhidla, isisiva nje sethumba, uya kwazisa ukuba loo mntu akanamlaza, uhlambulukile.
24Xa umntu ebetshile, size isilonda sivuthwe sibe nobubovu, singarhawuki, 25kufuneka loo mntu axilongwe ngumbingeleli. Ukuba kufumaneka ukuba uboya bumhlophe, yaye nesilonda sibhidle saba nzulu kunolusu lwangaphandle, loo nto ivele ngokutsha, sisifo esosulelayo solusu. Makazise umbingeleli ukuba loo mntu unomlaza. 26Kambe ke xa uboya bungajikanga baba mhlophe, nesilonda singenzulu kunolusu lwangaphandle, yaye sirhawukile, loo mntu makagcinwe bucala iintsuku zibe sixhenxe. 27Ngomhla wesixhenxe umbingeleli wobuya amxilonge, kuthi ke ukuba siyabhidla isilonda, kube ke loo mntu uneso sifo solusu soyikekayo, aze ke umbingeleli azise ukuba loo mntu unesifo esibangela umlaza. 28Kodwa ukuba eso silonda asibhidlanga, sihleli sinjengoko besinjalo, yaye sirhawukile, ayisiso ke isifo solusu esosulelayo. Umbingeleli uya kwazisa ukuba loo mntu akanamlaza; into anayo sisilonda nje esenziwe kukutsha.
29Ukuba kukho indoda nokuba ngumfazi othe wanesilonda entloko okanye esilevini, 30eso silonda masixilongwe ngumbingeleli. Ukuba eso silonda sinzulu kunolusu lwangaphandle, yaye noboya bujike baba mhlophe-bumthubi, eso silonda sibangwa sisifo solusu esosulelayo. Loo mntu ke kuya kwaziswa ukuba unomlaza. 31Xa kuthe akuxilongwa kwafunyanwa isilonda eso singenzulu kunolusu lwangaphandle, kodwa bona uboya bube bujikile ibala, kuya kufuneka agcinwe bucala iintsuku zibe sixhenxe. 32Wobuya asixilonge ke eso silonda umbingeleli ngosuku lwesixhenxe, kuthi ke ukuba asibhidlanga, noboya bungajikanga ibala, yaye singenzulu kunolusu lwangaphandle, 33loo mntu kufuneka achebe ashiye loo ndawo inesilonda. Aze ke umbingeleli aphinde amgcine bucala ezinye iintsuku ezisixhenxe. 34Wobuya amxilonge ngosuku lwesixhenxe, sithi ke ukuba asibhidlanga isilonda, singenzulu kunolusu lwangaphandle, azise ke umbingeleli ukuba loo mntu uhlambulukile, akanamlaza. Loo mntu kufuneka ahlambe izambatho zakhe, ukuze ahlambuluke. 35Xa sibhidla isilonda emva kokuba kuthiwe akanamlaza, 36umbingeleli wobuya amxilonge. Xa sibhidlile isilonda akukho mfuneko yakukhangela ukuba ngaba noboya bujikile na; kucacile ukuba loo mntu unawo umlaza. 37Xa umbingeleli ebone ukuba asibhidli isilonda, yaye noboya abujikanga bala, nesilonda sirhawukile, uya kwazisa ukuba loo mntu akanawo umlaza.
38Xa kukho indoda nokuba ngumfazi onamaqhakuva amhlophe emzimbeni, 39umbingeleli makamxilonge loo mntu. Ukuba loo maqhakuva akacacanga, olo lurhatshalala nje oluvelileyo; loo mntu akanawo umlaza.
40-41Ukuba umntu ukhuthuke iinwele enqentsu, okanye ebunzi, asingomlaza loo nto. 42Kodwa ukuba kuloo ndawo ikhuthukileyo kuvele isilonda esinobubovu, loo nto sisifo esoyikekayo solusu. 43Umbingeleli akuba emxilongile, abone ulusu lufukukile, lunobubovu, 44kufuneka azise ukuba loo mntu unesifo esosulelayo esisentloko, ngoko ke unomlaza.
45Umntu onaso esi sifo sosulelayo solusu kufuneka anxibe iimpahla ezidlakadlaka, angazichazi iinwele, aze azigqume ubuso obungezantsi, ahambe ekhwaza esithi: “Ndinomlaza! Ndinomlaza!” 46Uhlala enomlaza wonke lo gama asagula seso sifo, yaye kufuneka ahlale ngaphandle kwelali, kude nabanye abantu.
Inkqubo mayela nokungunda
47Xa impahla yoboya nokuba yilinen, 48okanye ilaphu loboya nokuba yilinen, nokuba lithwathwa okanye into eyenziwe ngethwathwa, 49ithe yanyepha yaba luhlaza okanye sabubomvu, inomngundaneUkungunda ayekufanisa neqhenqa nezinye izifo zolusu amaJuda loo nto, mayiboniswe umbingeleli. 50Umbingeleli woyiphicotha, aze ayibeke bucala iintsuku ezisixhenxe. 51Wobuya ayijonge ngosuku lwesixhenxe, kuthi ke ukuba kuye kwanwenwa ukungunda, athi loo nto inomlaza. 52Woyitshisa ke umbingeleli, nokuba yeyiphi kwezi zinto zikhankanyiweyo, kuba kaloku isasaza ukungunda omakutshatyalaliswe.
53Xa kubonakala ukuba umngundane awunwenwanga kuloo nto, 54umbingeleli uya kuthi mayihlanjwe, ize ibekwe bucala iintsuku ezisixhenxe. 55Kuya kuthi ke xa ngaba ukungunda akuphelanga naxa kunganwenwanga, loo nto inomlaza kufuneka itshiswe nokuba ingunde ngaphandle okanye ngaphakathi. 56Xa athe akuyijonga umbingeleli wafika umngundane uthothile, wowukrazula awususe kuloo nto, nokuba lilaphu, nokuba lithwathwa. 57Xa kuphinde kwavela ukungunda, umnini-nto makayitshise, kuba kuza kwanda umngundane. 58Xa athe wayihlamba loo nto, kwaza kwaphela ukungunda, makaphinde ayihlambe, ukuze ingabi namlaza.
59Nantso ke inkqubo ngokuphathelele empahleni engundileyo, nokuba yeyoboya, nokuba yeyelinen, nokuba yinto eyenziwe ngethwathwa.